DataNumen: Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Bogga ugu weyn Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Nidaamkan waxaa soo saaray hay'adaha ku taxan Qaybta M ee hoos ku xusan (wadajir, "DataNumen”,“ Anaga ”,“ anaga ”ama“ kuweena ”). Nidaamkan waxaa loola dhaqmayaa shaqsiyaadka ka baxsan ururkeena ee aan la falgalno, oo ay ku jiraan kuwa soo booqda degelladayada ("Websaydhadeenna"), macaamiisha, iyo dadka kale ee adeegsada Adeegyadeenna (wada jir, "idinka"). Erayada qeexan ee loo adeegsaday Siyaasaddan waxaa lagu sharaxay Qaybta (N) ee hoose.
Ujeeddooyinka Siyaasaddan, DataNumen waa Maamulaha Macluumaadkaaga Shakhsiyeed. Faahfaahinta xiriirka waxaa lagu bixinayaa Qeybta (M) ee hoose si loo helo applicable DataNumen hay'addu waxay ka jawaabi kartaa su'aalaha ku saabsan isticmaalka iyo ka shaqeynta Xogtaada Shakhsiyeed.
Siyaasaddan waa la beddeli karaa ama la cusbooneysiin karaa waqti ka waqti si ay uga tarjumto isbeddelada ku yimaada dhaqamadeena marka la eego Nidaamka Xogta Shakhsiyeed, ama isbeddelada applicable sharciga. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad si taxaddar leh u akhrido Siyaasaddan, iyo inaad si joogto ah u hubiso boggan si aad dib ugu eegto wixii isbeddel ah ee aan ku sameyn karno iyadoo la raacayo shuruudaha Siyaasaddan.
DataNumen wuxuu ku shaqeeyaa magaca soo socda: DataNumen.
(B) Ka shaqeynta Macluumaadkaaga Shakhsiyeed
Ururinta Xogta Shakhsiyeed: Waxaan ururin karnaa Macluumaadka Shakhsiyeed ee adiga kugu saabsan:
Markaad nagala soo xiriirto emayl, taleefan ama qaab kale.
Nidaamka caadiga ah ee xiriirka aan kula leenahay adiga (tusaale, Xogta Shakhsiyeed ee aan helno inta aan maamusho lacagahaaga).
Markii aan bixinno Adeegyo.
Markii aan ka helno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed dhinacyada saddexaad ee na siiya, sida wakaaladaha tixraaca amaahda ama hay'adaha sharci fulinta.
Markaad booqato mid ka mid ah Websaydhadeena ama aad isticmaasho wax astaamo ah ama agab ah oo laga heli karo ama loo maro Websaydhadeena. Markaad booqato Websaydh, qalabkaaga iyo biraawsarkaagu wuxuu si otomaatig ah u soo bandhigi karaa macluumaadka qaarkood (sida nooca qalabka, nidaamka hawlgalka, nooca biraawsarka, dejimaha biraawsarka, cinwaanka IP-ga, dejinta luqadda, taariikhaha iyo waqtiyada ku xirnaanta Websaydh iyo macluumaadka kale ee isgaarsiinta farsamada) , kuwaas oo qaarkood ay noqon karaan Xogta Shakhsiyeed.
Markaad noo soo gudbiso resumeygaaga / CV-gaaga si aad noogu dalbato codsi shaqo.
Abuuritaanka Xogta Shakhsiyeed: Marka aan bixinayno Adeegyadeena, waxaan sidoo kale abuuri karnaa Macluumaadka Shakhsiyeed ee adiga kugu saabsan, sida diiwaanada ku saabsan isdhexgalkaaga annaga iyo faahfaahinta taariikhda dalabkaaga.
Xogta Shakhsiyeed ee La Xiriira: Qeybaha Xogta Shakhsiyeed ee adiga kugu saabsan ee aan ka shaqeyn karno waxaa ka mid ah:
Faahfaahin shaqsiyadeed: magaca (magacyada); jinsiga; taariikhda dhalashada / da'da; dhalashada; iyo sawir.
Faahfaahinta xiriirka: cinwaanka rarka (tusaale ahaan, soo celinta asalka warbaahinta iyo / ama aaladaha kaydinta); bogostcinwaanka al; nambarka taleefanka; cinwaanka emailka; iyo faahfaahinta warbaahinta bulshada.
Faahfaahinta bixinta: cinwaanka biilasha; lambarka koontada bangiga ama nambarka kaarka deynta; magaca kaarka haystaha ama xisaabiye; kaarka ama faahfaahinta amniga koontada; kaarka 'ansax ah' laga bilaabo taariikhda; iyo taariikhda kaarka uu dhacayo.
Aragtida iyo fikradaha: wixii aragti iyo aragti ah ee aad doorato inaad noo soo dirto, ama si guud post nagu saabsan baraha bulshada.
Fadlan la soco in Xogta Shakhsiyeed ee adiga kugu saabsan ee aan ka shaqeyno ay sidoo kale ku jiri karto Xog Shakhsiyeed oo Xasaasi ah sida hoos lagu qeexay.
Saldhig sharci ah oo lagu shaqeynayo Xogta Shakhsiyeed: Marka la shaqeynayo Macluumaadkaaga Shakhsiyeed ee la xiriira ujeedooyinka lagu qeexay Siyaasaddan, waxaan ku tiirsanaan karnaa mid ama in ka badan oo ka mid ah saldhigyada sharci ee soo socda, iyadoo kuxiran xaaladaha:
waxaan helnay ogolaanshahaaga hordhaca ah ee socodsiinta howsha (aasaaskan sharciga ah waxaa kaliya loo adeegsadaa laxariirka howsha oo gabi ahaanba volun ahtary - looma adeegsado Ka-baaraandegidda taas oo lama huraan u ah ama waajib ku ah sinnaba);
Hawshu waxay lagama maarmaan u tahay heshiis kasta oo aad nala gasho;
howsha waxaa u baahan applicable sharciga;
Hawlgalku waa lagama maarmaan si loo ilaaliyo danaha muhiimka ah ee shaqsi kasta; ama
Waxaan leenahay dano sharci ah oo aan ku fulin karno Hawlaha ujeeddadeeduna tahay maareynta, ku shaqeynta ama kor u qaadida ganacsigeenna, dantaas xalaasha ahna kuma dhaafin danahaaga, xuquuqdaada aasaasiga ah, ama xorriyadahaaga.
Ka shaqeynta Xogtaada Xasaasiga ah ee Shakhsiyeed: Ma dooneyno inaan uruurino ama haddii kale ku shaqeyno Xogtaada Xasaasiga ah ee Shakhsiyeed, marka laga reebo halka:
howsha ayaa loo baahan yahay ama loo oggol yahay applicable sharciga (tusaale ahaan, inaad u hoggaansanaato waajibaadkayaga soo sheegidda kala-duwanaanta);
Hawshu waxay lagama maarmaan u tahay soo ogaanshaha ama ka hortagga fal dambiyeedka (oo ay ka mid yihiin ka hortagga khayaanada, lacagta la dhaqay iyo maalgelinta argagixisada);
Hawshu waxay lagama maarmaan u tahay dejinta, jimicsiga ama difaaca xuquuqda sharciga; ama
waxaan leenahay, si waafaqsan applicable law, waxay heshay ogolaanshahaaga hore ee cad kahor Hawlgalinta Xogtaada Shakhsiyeed ee Xasaasiga ah (sida kor ku xusan, aasaaskan sharciga ah waxaa loo isticmaalaa oo keliya marka laxariirto Processing-ka oo gebi ahaanba volun ahtary - looma adeegsado Ka-baaraandegidda taas oo lama huraan u ah ama waajib ku ah sinnaba).
Haddii aad na siiso macluumaad shakhsiyadeed oo xasaasi ah (tusaale ahaan, haddii aad na siiso qalab aad nooga baahan tahay inaan ka soo kabanno xogta) waa inaad hubisaa inay sharci tahay inaad noo soo bandhigto macluumaadka noocan oo kale ah, oo ay ku jirto hubinta mid ka mid ah saldhigyada sharciga ah kor ku xusan ayaa noo diyaarsan iyada oo la tixraacayo Nidaamka Xogta Shakhsiyeed ee Xasaasiga ah.
Ujeeddooyinka aan uga shaqeyn karno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed: Ujeeddooyinka aan uga shaqeyn karno Xogta Shakhsiyeed, oo ku xiran applicabsharciga le, waxaa ka mid ah:
Websaydhada: ku shaqeynta iyo maamulida Websaydhadeena; ku siinaya adiga waxyaabo; kuusoo bandhigaya xayeysiin iyo macluumaad kale markaad booqaneyso Shabakadahayada; iyo inaan kula xiriiro oo aan kugula macaamilo shabakadeena.
Bixinta Adeegyada: bixinta Shabakadahayada iyo Adeegyada kale; bixinta adeegyo iyadoo laga jawaabayo amarrada; iyo isgaarsiinta la xiriirta Adeegyadaas.
Isgaarsiinta: kula soo xiriirayo adiga oo adeegsanaya qaab kasta (oo ay ku jiraan iimayl, taleefan, fariin qoraaleedka, warbaahinta bulshada, post ama shaqsi ahaan) iyadoo la hubinayo in isgaarsiinta noocaas ah lagu siiyo adiga oo raacaya applicable sharciga.
Isgaarsiinta iyo howlaha IT: maaraynta nidaamyadeenna isgaarsiinta; hawlgalka amniga IT; iyo xisaabinta amniga IT.
Caafimaadka iyo badbaadada: qiimeynta caafimaadka iyo amniga iyo diiwaan gelinta; iyo u hogaansanaanta waajibaadka sharciga ee la xiriira.
Maamulka Maaliyadeed: iibinta; maaliyadda; xisaabinta shirkadaha; iyo maaraynta iibiyeyaasha.
Sahaminta: kula shaqeynaya ujeeddooyinka helitaanka aragtidaada Adeegyadeena.
Hagaajinta Adeegyadeena: aqoonsashada arrimaha Adeegyada jira; qorsheynta hagaajinta Adeegyada jira; iyo abuurista Adeegyo cusub.
Kheyraadka Aadanaha: maamulka codsiyada jagooyinka nala.
Voluntary bixinta Macluumaadka Shakhsi ahaaneed iyo cawaaqibta bixinta la'aanta: Bixinta macluumaadkaaga shaqsiyeed waa mid iska caadi ahtary oo badanaa waxay noqon doontaa shuruud lama huraan u ah si aan heshiis ula galno oo noo suurtogelisa inaan fulino waajibaadkayada qandaraas ee adiga kugu saabsan. Kuma lihid waajib sharci ah inaad na siiso Macluumaadkaaga Shakhsiyeed; si kastaba ha noqotee, haddii aad go'aansato inaadan na siinin Macluumaadkaaga Shakhsiyeed, ma awoodi karno inaan ku soo gabagabeyno xiriir qandaraas ah adiga iyo inaan fulino waajibaadka qandaraaska ee adiga kugu saabsan.
(C) U bandhigida macluumaadka shakhsiga ah dhinacyada saddexaad
Waxaa laga yaabaa inaan u siidino Macluumaadkaaga Shakhsiyadeed hay'adaha kale ee ka tirsan gudaha DataNumen, si loo buuxiyo waajibaadkayaga qandaraaska ah ee adiga kugu saabsan ama ujeeddooyin ganacsi oo sharci ah (oo ay ku jiraan bixinta adeegyo adiga iyo ka shaqeynta Websaydhadeenna), iyadoo la raacayo applicable sharciga. Intaa waxaa dheer, waxaan u siideyn karnaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed:
mas'uuliyiinta sharciga iyo sharciyeynta, markii la codsado, ama ujeeddooyinka ah in la soo sheego wixii dhab ah ama looga shakisan yahay jabinta qalabkacabsharci ama sharci;
xisaabiyeyaasha, hantidhawrrada, qareennada iyo lataliyayaasha kale ee xirfadlayaasha ah ee ka baxsan DataNumen, iyadoo la raacayo heshiis qandaraas ama waajibaad sharciyeed oo qarsoodi ah;
Hawlwadeenka saddexaad (sida bixiyeyaasha adeegyada lacag bixinta, shirkadaha dhoofinta / dirista, shirkadaha keena tikniyoolajiyadda, bixiyeyaasha sahaminta qanacsanaanta macaamiisha, hawlwadeennada adeegyada "live-chat" iyo hawlwadeennada bixiya adeegyada u hoggaansamida sida hubinta liisaska mamnuucista ee ay soo saartay dowladda, sida Xafiiska Xakamaynta Hantida Dibadda), oo ku taal meel kasta oo adduunka ah, iyada oo ku xiran shuruudaha hoos lagu xusay Qeybtaan (C);
cid kasta oo ay khusayso, hay'ad sharci fulin ama maxkamad, illaa iyo inta lagama maarmaanka u ah aasaaska, jimicsiga ama difaaca xuquuqda sharciga, ama cid kasta oo ay khuseyso ujeeddooyinka ka-hortagga, baaritaanka, ogaanshaha ama dacwadda dembiyada ciqaabta ama fulinta ciqaabta ciqaabta;
wax soo iibsade (yaasha) seddexaad ee khuseeya, haddii ay dhacdo inaan iibino ama wareejinno dhammaan ama qayb kasta oo khuseysa ganacsigeenna ama hantideena (oo ay ku jiraan haddii ay dhacdo dib-u-habeyn, kala dirid ama dheecaan bixin), laakiin kaliya iyadoo la raacayocable sharciga; iyo
Websaydhadeenu waxay isticmaali karaan waxyaabaha dhinac saddexaad ka kooban. Haddii aad dooratid inaad la macaamisho wax kasta oo ka mid ah waxyaabahaas, Macluumaadkaaga Shakhsiyeed waxaa laga yaabaa in lala wadaago bixiyaha qaybta saddexaad ee barnaamijka ku habboon ee warbaahinta bulshada. Waxaan kugula talineynaa inaad dib u eegis ku sameyso siyaasada gaarka ah ee qeybta saddexaad ka hor intaadan la falgalin waxa ku jira.
Haddii aan la shaqeyno Hawl-wadeen saddexaad oo ka shaqeynaya Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed, waxaan soo gabagabeyn doonnaa heshiis ka baaraandegidda xogta ah sida uu dalbado barnaamijkacable sharciyada la leh processor-ka nooca saddexaad ah si uu Processor-ku u noqdo mid waajibaadka qandaraas ku qabanaya: (i) Kaliya u socodsiiya Xogta Shakhsi ahaaneed iyadoo la raacayo tilmaamahayaga qoran ee hore; iyo (ii) adeegso tallaabooyin lagu ilaalinayo sirta iyo amniga Xogta Shakhsiyeed; oo ay weheliyaan wixii shuruudo dheeri ah ee ku hoos jira applicable sharciga.
Waxaan qarin karnaa Xogta Shakhsi ahaaneed ee ku saabsan isticmaalka Websaydhada (tusaale ahaan, iyadoo aan ku duubno xogta noocan oo kale ah qaab isku-darka) oo aan ula wadaagno xogta noocan ah kuwa aan iska kaashanno ganacsiga (oo ay ku jiraan la-hawlgalayaasha saddexaad ee ganacsiga).
D) Wareejinta Xogta Shakhsiyeed ee Caalamiga ah
Dabeecadda caalamiga ah ee ganacsigeenna awgeed, waxaan u baahan karnaa inaan ku wareejino Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed gudaha DataNumen Kooxda, iyo dhinacyada saddexaad sida ku xusan Qeybta (C) kore, ee la xiriirta ujeedooyinka lagu qeexay Siyaasaddan. Sababtaas awgeed, waxaan u wareejin karnaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed dalal kale oo laga yaabo inay leeyihiin heerar ka hooseeya ilaalinta xogta marka loo eego Midowga Yurub sababo la xiriira sharciyo kala duwan iyo shuruudaha u hoggaansanaanta ilaalinta xogta ee kuwa khuseeya waddanka aad ku sugan tahay.
Halka aan macluumaadkaaga shakhsiyadeed ugu wareejineyno dalal kale, sidaas ayaan ku sameynaa, meeshii loo baahdo (iyo marka laga reebo ka wareejinta EEA ama Switzerland iyo Mareykanka) iyadoo lagu saleynayo Heerarka Heshiiska Heerarka. Waxaad codsan kartaa nuqul ka mid ah Heerarka Heshiiska Heerarka adiga oo adeegsanaya faahfaahinta xiriirka ee lagu bixiyey Qaybta (M) ee hoose.
(E) Amniga Xogta
Waxaan hirgelinay tallaabooyin farsamo iyo abaabul amni oo habboon oo loogu talagalay in laga ilaaliyo Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed burburka shilalka ama sharci darrada ah, luminta, wax ka beddelka, shaacinta aan la fasaxin, marin la'aanta aan la oggoleyn, iyo qaababka kale ee sharci darrada ah ama aan la fasaxin ee Nidaamka, iyadoo la raacayo applicable sharciga.
Adiga ayaa mas'uul ka ah hubinta in wixii Macluumaad Shaqsiyeed ah ee aad noo soo dirto si ammaan ah loo diro.
(F) Xaqiijinta Xogta
Waxaan qaadnaa tallaabo kasta oo macquul ah si loo hubiyo in:
Macluumaadkaaga Shakhsiyeed ee aan ku shaqeyno waa sax oo, marka loo baahdo, la cusbooneysiiyo; iyo
wixii ka mid ah Xogtaada Shakhsiyeed ee aan ku shaqeyno ee aan sax ahayn (marka loo eego ujeedooyinka loo farsameeyay) waa la tirtirayaa ama la sixi doonaa iyadoo aan dib loo dhigin.
Waqti ka waqti ayaa laga yaabaa inaan ku weydiisanno inaad xaqiijiso saxnaanta macluumaadkaaga shakhsiyeed.
(G) Yaraynta Xogta
Waxaan qaadeynaa talaabo kasta oo macquul ah si aan u hubino in Xogtaada Shakhsiyeed ee aan ku shaqeyno ay ku koobantahay Xogta Shakhsiyeed oo si macquul ah loogu baahan yahay iyadoo lala xiriirinayo ujeedooyinka lagu qeexay Siyaasaddan (oo ay ku jiraan bixinta adeegyada adiga).
(H) Xogta haynta
Waxaan qaadnaa talaabo kasta oo macquul ah si aan u hubino in Xogtaada Shakhsi ahaaneed kaliya lagu shaqeynayo muddada ugu yar ee lagama maarmaanka u ah ujeedooyinka lagu qeexay Siyaasaddan. Waxaan ku haysan doonaa nuqulada Xogtaada Shakhsiyeed foom ogolaanaya aqoonsiga ilaa iyo inta:
Waxaan ku ilaalinaynaa xiriir joogto ah adiga (tusaale ahaan, meesha aad ka mid tahay isticmaaleyaasha adeegyadeena, ama si sharci ah lagugu daray liistadayada oo aanad diiwaangelinta uga bixin); ama
Macluumaadkaaga Shakhsiyeed ayaa lagama maarmaan u ah ujeeddooyinka sharciga ah ee lagu qeexay Siyaasaddan, taas oo aan u haysanno aasaas sharci oo sax ah (tusaale, halka xogtaada shaqsiyeed ay ku jirto amar uu siiyay cidda aad u shaqayso, oo aan dano sharci ah ka leenahay ka shaqeynta Xogtaas ujeeddooyinka ah u shaqeynta ganacsigeenna iyo gudashada waajibaadka naga saaran qandaraaskaas).
Intaa waxaa sii dheer, waan xafididoonaa Macluumaadka Shakhsiyeed muddada:
appli kastacable muddada xaddidan ee hoos timaadda applicable law (yacni, xilli kasta oo qof kasta uu noo keeni karo dacwad sharci ah oo naga dhan oo la xiriirta Macluumaadkaaga Shakhsiyeed, ama macluumaadkaaga Shakhsiyeed ay ku habboonaan karaan); iyo
laba (2) bilood oo dheeri ah kadib dhamaadka applikacable muddada xaddidaadda (sidaa darteed, haddii qofku keeno sheegasho dhammaadka muddada xaddidan, waxaan wali awoodnaa waqti macquul ah oo aan ku garan karno wixii Macluumaad Shakhsiyeed ee ku habboon sheegashadaas),
Haddii ay dhacdo in la keeno wixii sheegashooyin sharciyeed ee khuseeya, waxaan sii wadeynaa inaan ku shaqeyno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed muddooyinka dheeriga ah ee lagama maarmaanka u ah sheegashadaas.
Inta lagu jiro muddooyinka kor ku xusan ee laxiriira sheegashooyinka sharciga ah, waxaan xakameyn doonnaa Nidaamkeena Xogtaada Shakhsiyeed si aan u keydinno, una ilaalino amniga, Xogta Shakhsiyeed, marka laga reebo ilaa heerka ay u baahan tahay in macluumaadka shakhsiga ah dib loo eego iyadoo lala xiriirinayo sheegasho sharci, ama waajibaad kasta oo ka hooseeya applicable sharciga.
Marka muddooyinka kor ku xusan, mid kasta ilaa heerka applicable, ayaa soo gabagabeyney, waxaan si joogto ah u tirtiri doonnaa ama u baabi'in doonnaa Macluumaadka Shakhsiyeed ee khuseeya.
(I) Xuquuqdaada sharciga ah
Ku xiran applicabsharciga, waxaad lahaan kartaa xuquuq dhowr ah oo ku saabsan Nidaamka Macluumaadkaaga Shakhsiyeed, oo ay ka mid yihiin:
xuquuqda aad u leedahay inaad codsato helitaanka, ama nuqulada, Xogtaada Shakhsiyeed ee aan ku shaqeyno ama aan xakameyno, oo ay weheliso macluumaadka ku saabsan nooca, ka shaqeynta iyo shaacinta macluumaadkaas shaqsiyeed;
xaqa aad u leedahay inaad codsato sixitaanka wixii khaladaad ah ee ku jira Macluumaadkaaga Shakhsiyeed ee aan ku shaqeyno ama aan xakameyno;
xaq u leedahay inaad codsato, sababo sharci ah awgood:
tirtirida Macluumaadkaaga Shakhsiyeed ee aan ku shaqeyno ama xakameyno;
ama xaddidaadda Ku Shaqeynta Xogtaada Shakhsiyeed ee aan ku shaqeyno ama xakameyno;
xaq u lahaanshaha diidmada, asbaabo sharci ah, oo ku saabsan Nidaamka Xogtaada Shakhsiyeed annaga ama annaga oo matalayna;
Xaq u lahaanshaha Xogtaada Shakhsiyeed ee aan ku shaqeyno ama xakameyno in lagu wareejiyo Maamulaha kale, illaa heer applicable;
xaq u lahaanshaha ka noqoshada ogolaashahaaga ka baaraandegidda, halkaasoo sharciyeynta howshu ku saleysan tahay oggolaansho; iyo
xaqa aad u leedahay inaad ku xareyso cabashooyinka Hay'adda Ilaalinta Macluumaadka ee ku saabsan Nidaaminta Xogtaada Shakhsiyeed annaga ama annaga oo matalayna
Tani saameyn kuma yeelanayso xuquuqdaada sharciga ah.
Si aad u adeegsato mid ama in ka badan oo ka mid ah xuquuqahan, ama aad weydiiso su'aal ku saabsan xuquuqdaas ama qodob kale oo ka mid ah Nidaamkan, ama ku saabsan Nidaamkayaga Macluumaadkaaga Shakhsiyeed, fadlan isticmaal faahfaahinta xiriirka ee lagu bixiyey Qaybta (M) ee hoose.
Haddii aan ku siineyno adeegyo ku saleysan amarro, bixinta noocaas ah ee Adeegyada ah waxaa lagu xakameynayaa shuruudaha qandaraaska ee lagu siiyay. Haddii ay dhacdo kala duwanaansho u dhexeeya ereyada noocaas ah iyo Siyaasaddan, Siyaasaddani waa mid dhameystirantary.
Cookie waa fayl yar oo la dhigo qalabkaaga markii aad booqato degel internet (oo ay ku jiraan Websaydhadeenna). Waxay diiwaangelisaa macluumaadka ku saabsan aaladdaada, biraawsarkaaga iyo, mararka qaarkood, dookhaaga iyo caadooyinka daalacashada. Waxaan ku shaqeyn karnaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed iyadoo loo marayo tiknoolajiyada cookie, iyadoo la raacayo tanyada Siyaasadda cookie.
(K) Shuruudaha Adeegsiga
Dhammaan isticmaalka Websaydhadeenu waxay ku xiran yihiin annaga Shuruudaha Isticmaalka.
(L) Suuq Geyn Toos ah
Ku xiran applicable law, meesha aad ku bixisay ogolaansho cad sida ku xusan applikacabsharciga ama halka aan kuu soo direyno xayeysiinta iyo isgaarsiinta suuq geynta ee la xiriira badeecooyinka iyo adeegyadayada la midka ah, waxaa laga yaabaa inaan ka baaraandegno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed inaan kula soo xiriirno emayl, taleefan, boostada tooska ah ama qaabab kale oo isgaarsiineed si aan kuu siino macluumaad ama Adeegyo xiisaha kuu ah Haddii aan ku siino Adeegyo, waxaan kuu soo diri karnaa macluumaad ku saabsan Adeegyadeena, dallacsiinta soo socota iyo macluumaad kale oo adiga xiiso kuu leh, adoo adeegsanaya faahfaahinta xiriirka aad na siisay annaga oo had iyo jeer u hoggaansameyna applicable sharciga.
Waad ka bixi kartaa liiskayaga e-mayl ee dhiirrigelinta ah ama joornaalada wakhti kasta adoo gujinaya cinwaanka ka-saar la'aanta ku jirta emayl kasta ama joornaal kasta oo aan dirno. Ka dib markii aad ka saarto rukunka, kuuma soo diri doonno emayllo dheeri ah, laakiin waxaan sii wadeynaa inaan kula soo xiriirno illaa inta lagama maarmaanka u ah ujeedooyinka Adeegyada aad codsatay.
(M) Faahfaahinta xiriirka
Haddii aad hayso wax faallooyin ah, su'aalo ama walaac ah oo ku saabsan mid ka mid ah macluumaadka ku jira Nidaamkan, ama arrimo kale oo la xiriira ka shaqeynta Xogta Shakhsiyeed DataNumen, fadlan nala soo xiriir.
'Maamulaha' waxaa loola jeedaa cidda go'aamisa sida iyo sababta loo socodsiinayo Xogta Shakhsiyeed. Gobollo badan, Maamulaha ayaa leh mas'uuliyadda koowaad ee u hoggaansamida qalabkacable sharciyada ilaalinta xogta.
'Hay'adda Ilaalinta Macluumaadka' macnaheedu waa hay'ad dawladeed oo madax bannaan oo sharci ahaan loo xilsaaray inay kormeerto u hoggaansanaanta applicable sharciyada ilaalinta xogta.
'EEA' waxaa loola jeedaa Aagga Dhaqaalaha Yurub.
'Xogta Shakhsiyeed' macnaheedu waa macluumaad ku saabsan shaqsi kasta, ama shaqsi kasta oo laga garan karo. Tusaalooyinka Xogta Shakhsiyeed ee aan wax ka qaban karno waxaa lagu bixiyay Qeybta (B) kore.
'Habraac', 'Hawlgal' ama 'Hawlgal' macnaheedu waa wax kasta oo lagu sameeyo Xogta Shakhsi ahaaneed, ha ahaato ama ha ahaato qaab otomaatig ah, sida ururinta, duubista, abaabulka, qaabeynta, keydinta, la qabsiga ama wax ka beddelka, dib u soo celinta, la tashiga, adeegsiga, shaacinta gudbinta, faafinta ama haddii kale la heli karo, iswaafajinta ama isku darka, xaddidaadda, tirtirka ama baabi'inta.
'Processor' waxaa loola jeedaa qof ama hay'ad kasta oo ku shaqeysa Macluumaadka Shakhsiyeed iyada oo wakiil ka ah Maamulaha (marka laga reebo shaqaalaha Maamulaha).
'Adeegyada' waxaa loola jeedaa adeeg kasta oo ay bixiso DataNumen.
'Xogta Xasaasiga ah ee Shakhsiyeed' waxaa loola jeedaa Xogta Shakhsiyeed ee ku saabsan isirka ama jinsiyada, fikradaha siyaasadeed, diinta ama falsafada caqiidada, xubinnimada ururka shaqaalaha, caafimaadka jirka ama maskaxda, nolosha galmada, wixii dambi dhab ah ama la sheegay ee ciqaabeed ama ciqaab, nambar aqoonsi qaran, ama macluumaad kale oo loo qaadan karo xasaasi ah hoos applicable sharciga.